အဆိုပါ Cinque Terre အတွက်ခြေလျင်ခရီးအီတလီနိုင်ငံပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ, နှင့်အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်အချက်များထဲကတစ်ခု. ၎င်း၏တောင်တက်လမ်းကြောင်းဥရောပအတွက်အလှဆုံးအကြားနှင့်သငျသညျတခုပြင်ပတွင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်များအကြားအချို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလိုသူ့တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်များမှာ အီတလီအစားအစာများ, ၎င်းသည်အီတလီနိုင်ငံကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်အကြိုးရဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အံ့မခန်းကမ်းရိုးတန်း.
• ပြီးတာနဲ့အီတလီနိုင်ငံ, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား၏အကူအညီနှင့်အတူ, ရထားနေဆဲ Cinque Terre ရောက်ရှိဖို့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒေသခံတစ်ဦးရထားရှိပါတယ်, အဆိုပါ Cinque Terre Express ကိုရထား, အဆိုပါအကြားကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ပြေးရာ ဘူတာ , La Spezia နှင့် Levanto ဗဟို. ဒါဟာအားလုံးငါးမြို့များမှာရပ် (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), သငျသညျထိုဒေသတွင်နေတခါနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အကြားရွှေ့ဖို့ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် (သင်အဖန်ဖန်-စိန်ခေါ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ခွဖို့ရွေးချယ်မဟုတ်လျှင်). နွေရာသီ၏အဖြစ် 2016, အဆိုပါ Cinque Terre Express ၏ကုန်ကျစရိတ်ခရီးစဉ်နှုန်း€ 4. off-ရာသီစဉ်အတွင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်နိုဝင်ဘာလကနေမတ်လမှ, ကုန်ကျစရိတ်€ 1,80 မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်. ဤသည်ရထားယူထားတဲ့ထိုင်ခုံမပူဇော်ဘူး.
အဆိုပါ လင်းယုန်လမ်းလျှောက် တက်ဖန်ဆင်းထားသည် 23 ဆက်နွယ်နေအဆင့်ဆင့်, အဆိုပါ Tirol မှတဆင့်တစ်ဦးအသက်ရှူ-ဆည်းပူးနေလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာထားတဲ့. ဒေသတွင်း၌အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်အချက်များ, များစွာသောကဏ္ဍများကိုလွယ်ကူစွာ cable ကိုကားဖြင့်ဝင်ရောက်နဲ့ full အဖြစ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်- သို့မဟုတ်တစ်ဝက်နေ့ ခရီးစဉ်. ငါတို့သည်ဤဘလော့ဂ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.
သငျသညျတစျနေ့တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် Multi-အပတ်ကစွန့်စားမှုစီစဉ်နေပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်များ, သင်လင်းယုန်လမ်းလျှောက်တဲ့အကြီးအဖြစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ပြင်ပအတွေ့အကြုံ. ဒါဟာစူးစမ်းဖို့မတူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း, အတှေ့အကွုံ, နှင့်သဘောသဘာဝနှင့်အတူချိတ်ဆက်.
ရံဖန်ရံခါတောင်တက်သမားများအတွက်နေ့ဝက်လမ်းလျှောက်ခြင်း. အောက်ပိုင်းအင်းချိုင့်၌ Kramsach ထံမှ, အဆိုပါ Sonnwendjoch အိမ်သူအိမ်သားဖို့ကုလားထိုင်ဓာတ်လှေကားယူ. တစ်ဦးကအတိုလမ်းလျှောက်သည့် idyllic Zireiner အိုင်မှဦးဆောင်, နီးပါး 1800-မီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တစ်ဦးချိုင့်၌တည်ရှိပြီးသော - ပူထဲမှာချွတ်အအေးတစ်ဦးအကြီးအရာအရပျ နွေရာသီ လများ. အဆိုပါလမ်းလျှောက် Zireiner Alm ကျက်စားရာမှဆက်လက် (1,698မီတာ) အဆိုပါကုလားထိုင်ဓာတ်လှေကား၏ထိပ်မှပြန်မီ, သငျသညျကိုပြန်ဆင်းအင်းချိုင့်သို့စီးခွင့်ပြု.
လွယ်ကူပါတယ် ခရီးသွား ဗြိတိန်မှ ရထားသြစတြီးယား. သင့်ထံမှသွားနိုင်ပါတယ် လန်ဒန် ဗီယင်နာမှ, အားဖြင့်တစ်နေ့အတွက် Salzburg သို့မဟုတ် Innsbruck မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာနေ့လယ်စာယူ Eurostar ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေဘရပ်ဆဲလ်မှ, တစ် Thalys မြန်နှုန်းမြင့် မီးရထား သို့ Cologne, နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Nightjet အိပ်ပျော်ရထား Innsbruck ရှိရန်, Linz, သို့မဟုတ်ဗီယင်နာနေ့ချင်းညချင်း. အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့, Tirol မှရတဲ့အများပြည်သူ၎င်း၏ပြည့်စုံကွန်ယက်လွယ်ကူသည် တင်ဆောင်. ရထားသုံးပြီးဒေသတဝိုက်ခရီးသွားလာရန်လွယ်ကူသည်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ, လင်းယုန်လမ်းလျှောက်သူအပေါင်းတို့အပေါ်ယူလိုသောတောင်တက်ဒေသခံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်ရဲ့ start နှင့် finish ကိုမှတ်ကိုရယူနိုငျပါသညျ.
အကောင်းဆုံးတောင်တက် Starting Point သို့: CAMINO DE SANTIAGO - စပိန်
အဆိုပါ Camino စိန့်ဂျိမ်း၏လမ်းစဉ်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုလူသိများသည်. Camino ဘုရားဖူးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးဟာ Santiago de Compostela ဆီကို ဦး တည်ပါတယ်, (စန်တီယာဂို), နဝမရာစုအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်. ဘုရားဖူး 10th အတွက်ရေပန်းစားခဲ့သည်, 11ကြိမ်မြောက်, နှင့် 12 ရာစု, ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များငြင်းဆန်ခဲ့သည်.
20 ရာစုအားဖြင့်, နီးပါးအဘယ်သူမျှမလမ်းကြောင်းမဆိုလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်. ထို့နောက် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်လမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်. သူတို့ကစတင်ရေးသားခဲ့သည် လမ်းကြောင်း map နောက်တဖန်.
21 ရာစုမှာတော့, တစ်ဦးဘုရားဖူးများ၏စိတ်ကူးဖြစ်ကောင်း quaint ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, တစ်လလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ခေတ်သစ်ကိရိယာများမှအဆက်ပြတ်ခြင်းတို့သည်အလွန်လွတ်မြောက်စေသည်.
Sarria သူတို့ Camino က de စန်တီယာဂိုပေါ်စတင်ရှိရာအမှတ်အဖြစ်ဘုရားဖူးများကပိုမိုနှစ်သက်မြို့ဖြစ်ပါသည်. ထက်ပိုပြီး၏ 300,000 အတွက်စန်တီယာဂိုက de Compostela ခရီးသွားကြောင်းဘုရားဖူး 2017, အချို့သော 60% အဆိုပါ Camino Frances ကိုလိုက်နာဖို့ရှေးခယျြခဲ့. ထက်ပြီးပို 80,000 သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ Starting Point သို့အဖြစ် Sarria ရှေးခယျြခဲ့. Sarria ကိုရွေးချယ်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ Compostela ဘုရားဖူးများအတွက်အနည်းဆုံးအကွာအဝေးကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် (အဆိုပါဘုရားဖူးရဲ့လက်မှတ်). စန်တီယာဂိုရန်အကွာအဝေးရုံငါးအဆင့်ဆင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ် နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ နှင့်ဘုရားဖူးများအတွက်န်ဆောင်မှု. Sarria ကနေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ရလွယ်ကူသည် စပိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ.
Lugo ကနေ, အဆိုပါ မီးရထား ထို့အပြင်အဆင်ပြေဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်. Renfe Lugo မှာနေတဲ့ Sarria ရန်သင့်အားရလိမ့်မည်ဟုမြောက်မြားစွာနေ့စဉ်ဆက်သွယ်မှုကမ်းလှမ်း 30 မိနစ်များ.
ဒါဟာ Westweg လမ်းကြောင်းအားလုံးဂျာမန်ခရီးဝေးတောင်တက်လမ်းကြောင်း၏မူလအစကဆိုသည်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာနောက်ကျောတွင်၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်လာခဲ့သည် 1900. ထိုကတည်းက, အဆိုပါလမ်းကြောင်းတစ်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်စိုက်ပျိုးထားပါတယ် 177 မိုင် (285 ကီလိုမီတာ) - မြောက်ဘက်ရှိ Pforzheim မှတောင်ဘက်ရှိ Basel တွင်အဆုံးသတ်သည်.
သင့်ရဲ့တောင်တက်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်အချို့သောသဘောသဘာဝတောင်တက်ခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? သင့်ရဲ့ရထားမိနစ်အတွင်းမှာ NO အပိုဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူဘွတ်ကင်လုပ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဘာ့ဂ် #တောင်တက် #လှိုင် #လမ်းကြောင်း longtrainjourneys trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ